Zuva: Chivabvu 10, 2020
Turkish Aerospace Industries, Inc. (TAI) vakawana neDare Anka chirongwa ruzivo kukura Unmanned Aerial Vehicle AKSUNGUR, vakatanga kusangana kuti zvombo. Achitaura nezvenyaya TUBITAK Defense Industry Research and Development [More ...]
Mvumo yekutengesa yeDzimba KOVİD-19 Zvinodhaka
Ministry of Health yakapa mvumo yekutengesa kune mushonga unogadzirwa nekambani yemishonga yemunharaunda kuti ushandise kurapwa kwe coronavirus (KOVID-19). Presidential Kukurukurirana kubva President Fahrettin Altun akaita yepamutemo evanhu nevezvenhau nyaya [More ...]
Nyaya dzeCorona Kutanga Kukwira zvakare kuGerman
Kuwedzera kwehutachiona hwe corona mazuva mashoma mushure mekurambidzwa kwenharaunda kwatanga kuzorora muGerman, kwakasimudza kunetsekana kuti denda rinogona kubvapo zvakare mukutonga. Mune runyorwa rwezuva nezuva rweRobert Koch Disease Control Institute, [More ...]
Istanbul Airport Metro Project TBM Tunnels Inopedzisa Ceremony
Mutungamiri Recep Tayyip Erdoğan vakati vachapfuurira mujaho webasa kudzamara vafema. Erdogan akaenda kuGayrettepe-Kagithane Istanbul Airport Metro Project TBM Tunnels Kuguma Ceremony nemusangano wevhidhiyo. Kubva pane zvakataurwa naErdogan [More ...]
Mutungamiri Aktaş Asphalt Vashandi Vakaita Sahur
Bursa Metropolitan Municipality yakashandura nguva dzekushandiswa pakupera kwevhiki nekuda kwechirwere chekorona ichiita mikana uye yakatanga kufamba-famba mumitsetse mikuru isina kuvandudzwa kwemakore gumi nemashanu. [More ...]
Turkey AVM Kana pandichasangana Culture?
Mall tsika nokuti Turkey akatanga muna 1987 pamwe Galleria Mall. Capitol Shopping Mall yakavhurwa 1993 pamwe riparadzirwe mberi. Turkey guru kunotenga dzezvitoro This 14 AVM'si [More ...]
Zuva Rinoshungurudza muRuzhinji Zvokufambisa neCustomization Mangwana!
Mukati meriyero yekurwisa coronavirus, matanho ehutachigaro ari kutorwa mune dzimwe nzvimbo seye mangwana. Kuratidzira kwakanyanya kweizvi kunofungidzirwa kuve neruzivo mukufambisa kwevanhu. Nekuti zvese zvinorambidzwa pakutakura kwevanhu zvinoenderera mberi neMuvhuro, Chivabvu 11th. [More ...]
Kugadziridza Basa Kunoenderera paMbuya Istanbul Bus Station
IMM inoenderera ichichinjisa mafambiro mukati meguta kuita basa nekuda kwekuregedzera kurambidzwa. Kugadzirisa, kugadzirisa uye kuvandudza mabasa kwakatangwa paInternetul Bhazi terminal, iyo yakaregeredzwa kubvira yekota yekupedzisira yezana ramakore. [More ...]
Kufambisa Nyevero yaMay 11 kubva kuIMM! Sarudza Kufamba kana Kuchovha Bhasiketi
Istanbul Metropolitan Municipality, yambiro nezve zvakajairika izvo zvichatanga Muvhuro, Chivabvu 11. IMM inoshandisa motokari dzakavanzika muIstanbul, asi zvinotonyanya kukosha, nekuti mabhizinesi mazhinji achange achishanda zvakare. [More ...]
TCDD Tasimacilik yapedza timu pamwe nemidziyo kugadzirira kudzorera High Speed ​​Chitima (YHT) masevhisi, ayo akambomiswa nekuda kwekubuda kwe coronavirus; Yakamirira Sign kubva kune Ministry of Transport uye Zvivakwa Olcay Aydilek weHabertürk [More ...]
Gendarmerie uye Coast Guard Vashandi Vanozobatsirwa Kubva Kune Ruzhinji Vokufambisa Yemahara
kuchinja Dare chisarudzo chakaitwa akasununguka kushandisa mabhazi mabasa. Zvinoenderana neshanduko iyi, vendarmerie nevashandi vekuchengetedza mhenderekedzo vachabatsirwawo mumahofisi ezvekutakura vanhu pachena mahara .. Ndiani anogona kubatsirwa nemabasa ekufambisa neveruzhinji mahara pasina 2002/3654 [More ...]
Nhamba ye İstanbul AVM 2020
Istanbul, Turkey vakawanda sürdüy yokukwanisa guta zvikuru AVM'si. Kune huwandu hwe125 muIstanbul. Nzvimbo yekutengesa mitsva yakarongwa kuvhurwa muIstanbul muna 2020. Heano maTopu eKutenga gumi muIstanbul [More ...]
Mai Zübeyde vanoyeukwa pazuva raAmai
Day Amai muna Zübeyde Hanım Chirangaridzo mhemberero PAGUVA Monument Izmir Metropolitan Mayor Tunç Soyer, "Nhasi tiri huzurund musha mumudzimu wedu pakukura," akadaro. Vanaamai vachisimbisa kuti pane zvokuti rimwe chete zuva wokurangarira [More ...]
Süleyman Karaman (1956, Alaçayır Village, Refahiye) anga ari meinjiniya akashandawo semaneja mukuru weTCDD. Hupenyu hwedzidzo Mushure mekutangisa hupenyu hwake hwedzidzo muErzincan, akaenda kuIstanbul Pertevniyal High Chikoro chesekondari kudzidza. [More ...]
Shoma Kune zvitoro muTurkey?
In Turkey, pane pari vanosvika 436 zvidimbu Mall. Shopping mall inobatsira muhupfumi ne 13,2 miriyoni mativi emamita yenzvimbo inosiirwa. Indasitiri yezvekutengesa mall, iri kukura zuva nezuva, ine avhareji ye2020 panopera gore ra445. [More ...]
Yekutarisa yakasimba kubva kuIzmir Metropolitan kuenda kumashopu anotenga!
Izmir Metropolitan Municipality zvishoma nezvishoma zvitoro ichazarurwa musi May 11 nokuda kudiwa kutevedza mitemo coronavirus yatanga akaziviswa. Metropolitan Municipality mapurisa zvikwata uchatanga odhita kubva May wechi11. Izmir Metropolitan [More ...]
Rimwe 304 Bhazi rekutora chikamu mu ESHOT Fleet
Izmir Metropolitan Municipality uye mvuto 134 chaizvoizvo zvikuru tenders nokuda 170 mabhazi, kusanganisira 304 Solo. Zvichitevera kusaina chesungano nemotokari vacharwirwa mukati memwedzi mipfumbamwe. Izmir Metropolitan Municipality, iyo bhazi nengarava [More ...]
Hutsanana Tsigiro yeBarber uye Vhudzi
İzmir Metropolitan Municipality ichapa rutsigiro rwehutsanana kune vamabhudzi nevhudzi vhudzi, iro rinozovhurwazve muna Chivabvu 11 zvichiteerana nedenderedzwa reBazi reMukati. Izmir Metropolitan Municipality Environmental Protection uye Control Branch Directorate zvikwata nomumwe zvitoro [More ...]
Kutungamira Service ye19 Million Vadzidzi uye Vabereki Mukubatanidza 'Covid-12,5' neMEB
Coronavirus nguva dzinokwana vadzidzi mamiriyoni 1,5 12 zviuru nevabereki vavo vakapiwa mazano mwedzi 500-nguva nguva. National Education Minister Ziya Selcuk, 'Izvi ndizvo kure misoro kupa nhungamiro [More ...]
Rutsigiro rwemukaka wakasviba rinofanirwa kupihwa kune vanogadzira mukaka gore rino uye nyaya dzine chekuita nekutariswa kwemusika wemukaka dzakatemwa. Raw Milk kuitwa muna 2020 uye President Decision Support kuti ndangariro Markets mukaka, Official [More ...]
Iyo Middle Class 2nd Chikamu Chisingafambiswi Vhiza Vehicle Project Chibvumirano chakasainwa pakati pePurezidhendi Dziviriro Dziviriro Reindasitiri (SSB) uye ASELSAN. Mutungamiri wePurezidhendi weDziviriro Dziviriro. Dr. İsmail Demir: "Rubatsiro vabatsiri vauya kuMehmetçi! [More ...]
Trade Minister Ruhsar yakaitirwa 13 Pekcan Advisory Board sachigaro pamusangano, mavhidhiyo musangano wakaitwa pamwe nzira. Kuwedzera musangano Pekcan; TİM President İsmail Gülle, DEİK Mutungamiri Nail Olpak, TOBB Mutungamiri Rifat Hisarcıklıoğlu, [More ...]
Ministry of Culture uye Tourism yakatanga chirongwa che Healthy Tourism Certification, chichave chinoshanda kubva mwaka wechirimo wa2020. Vachitungamirirwa Bazi Health, Transportation, Interior uye Foreign Ministries nomupiro sectors vose pamwe wekuongorora [More ...]
Beyoğlu Tsika Mugwagwa Unoshanda Kuenderera mberi
Nechinangwa chekugadzira iyo mraba iyo Galata Tower inonyanya kukosha maererano nekushanya uye kuita iyo nzvimbo yekutanga yetsika uye mabasa emabasa, mabasa ari muByoyolulutsika Road Road Project, iyo yakarongedzwa neBazi reCustoms and Tourism, [More ...]
Kufamba Kwemhando yepamusoro Kunouya Kumigwagwa muBursa
Nemhaka motokari kuzara muna Bursa makore nazvo migwagwa havagoni kuva, zviri kuwana nyaradzo nokuda pamba nenguva yakatarwa. Bursa Metropolitan Municipality, iyo yakavandudza asphalt yeMerinos - Acemler gwara svondo radarika, ikozvino ndiyo yakafanana [More ...]